गरिब देशका महँगा मन्त्रीहरुः कुन मन्त्री कति महंगो गाडी चढ्छन् ? (भिडियो रिपोर्ट)::Digital News Paper
काठमाडौँ । उच्च पदस्थ पदाधिकारीका लागि राज्यले आधारभूत सुविधा दिनुपर्छ । र, त्यसैअन्तर्गत पर्छ–गाडीसहितका सुविधा पनि । तर,मन्त्रीका गाडी आधारभूत आवश्यकताका लागि हुन् कि विलासिताका लागि रु भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । किनकी मन्त्रीले चढ्ने प्रायः गाडी एक करोडभन्दा कम मूल्यका छैनन् । अझ कतिपय मन्त्रीले त दुई–तीनवटा गाडीसम्म ओगटेका छन् । मन्त्रीहरुलाई राज्यले ल्याण्डक्रुजर, प्राडो, पजेरो, स्कारपियोजस्ता महंगा ‘ब्राण्ड’को गाडी उपलब्ध गराएको छ । ‘ब्राण्ड’अनुसार मूल्य दुई करोड माथि पर्छ ।
सस्तो गाडी चढ्ने मन्त्रीले टाटाको ‘स्ट्रोम’, हुण्डाईको ‘क्रेटा’ प्रयोग गरिरहेका छन् । जसको मूल्य साठी लाखभन्दा बढी पर्छ । दुई–दुई करोड पर्ने गाडी चढ्नु आवश्यकता हो कि विलासिता भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । तर, मितव्ययी बन्ने भनेको सरकारलाई लागि यो प्रश्न ‘गौण’ हो । यो त भयो मन्त्रीको गाडीका लागि राज्यले गरिरहेको खर्च विवरण । इन्धन र मर्मतमा हुने खर्च पनि कहालीलाग्दो छ । मन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीका गाडी मर्मतमा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ९१ करोड ३५ र इन्धनमा २ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख खर्च भएको थियो ।
इन्धन र मर्मतलाई छोडेर आधारभूत आवश्यकतालाई मात्रै ख्याल गर्ने हो भने सवारी साधनका लागि राज्यले गरिरहेको खर्च निकै ठूलो छ । जसको प्रर्याप्त चर्चा हुँदैन । र, खर्च न्यूनीकरणका उपाय पनि खोजिदैन् । मन्त्रीलाई लागि एक, डेढ, दुई करोडका गाडी अत्यावश्यक हो या यो प्रबृत्ति विलासिता उन्मुख छ भन्नेबारे पनि खासै चर्चा भएको छैन । तर, सरकारी अधिकारी अत्यावश्यक नै हो भन्ने तर्क गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चल्यो खुलामञ्चमा डोजर ! हेर्नुहोस स्थलगत भिडियो
गृहमन्त्री बादल परे भीम रावलको टार्गेटमा ! ओलीलाई चेतावनी, के होला अब ?
अब छोराबाट जस्तै छोरीबाट वंश निरन्तरता हुने !
तपाईलाई निरोगी बनाउने ७ सुत्र
१२ वर्षपछि काठमाडाैँ उपत्यकामा हिमपात ( फाेटाे फिचर )